“အတွေးစလေးတွေ”: အမေဂျမ်းတို့ရွာ . . .
Posted by Han Kyi at 6:32:00 am
ဒီတစ်ပုဒ်က အက်ဆေးလေးပေါ့။ အရေးအသားတွေက ခါတိုင်းထက် ညက်တယ်ထင်မိတယ်ဆရာ...။ ကျွန်တော်တို့ မြို့က (နာဂစ်မှာ အသက်နဲ့ရင်းပြီး) မီးလင်းလာတာ တစ်နှစ်ကျော်ရုံကလေးဆိုတော့ ဆရာပြောတဲ့ ဒုက္ခဆင်တူတွေက ခုထိလတ်ဆတ်နေတုန်းလေ။ ရှပ်ပန်းဖြူနီမပါတဲ့ အမေဂျမ်းတွေ...လို့ ဆရာတွေးပြတာ သဘောကျတယ်။ နက်ဖြန် လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ရောက်ရင် ၀ါဒဖြန်ဖို့ စကားလုံးအသစ်လည်း ရသွားလို့ ကျေးဇူးပါ ဆရာ..။း)
ဟုတ်ပ ဆြာဟန်ရယ် .အမေဂျမ်းလက်သစ်တွေနဲ့တော့ ဘယ်တော့မှလဲ မတိုးတက်သလို ဘယ်ပစ္စည်းမှလဲ ကြာရှည်မခံဘူး .
သူများတွေဆီက မတရားရတဲ့ငွေဟာ ဘယ်တုန်းကများ တည်မြဲလို့လဲနော်
ဒီလိုအက်ဆေးလေးတွေများများရေးသင့်တယ် ဆြာရေး)
အကုန်ပေါင်းလိုက်တော့ ဘာပြောရမယ်တောင်မသိတော့ဘူး.. အပေါ်က ၀က်ကလေးနဲ့မီးသီးလုံးလေးကိုတော့ သဘောကျမိတယ်....
မီးဆိုလို့ ဒီဇင်ဘာနောက်ဆုံးပတ်မှာ လေးရက်မီးပျက်မယ်တဲ့ဆရာ မြို့နယ်ငါးမြို့နယ်လောက်ပါမယ်....။ ခုတော့အရင်လို ပျက်ချင်တုန်းပျက်မဟုတ်တော့ဘူး ကြိုတင်ကြေငြာတယ်...။ အဲဒါတော့ကွာသွားတယ်...။ ဆရာ့အက်ဆေးလေးသိပ်ကောင်းတယ် အဲလိုလေးများများရေးစေချင်တယ်...။
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လထဲကရေးထားတဲ့ ဒီအက်ဆေးလေး အခုပြန်တင်တဲ့အချိန်နဲ့ ကွက်တိပဲ ဦးဟန်ကြည်ရေ။ မနက်တိုင်းမီးပျက်တာ ညနေမှပြန်ကောင်းတယ်။ ဒီကနေ့ ဒီအက်ဆေးကောင်းလေး ဖတ်ခွင့်ကြုံဘို့ထင်ပါရဲ့ တစ်မနက်လုံးမီးမပျက်သေးဘူး ဦးဟန်ကြည်ရေး)
ပေါက်ရောက်သွားရင်တော့ နိုင်ငံအ၀ှမ်း မီးဆွဲခြင်း မီးကစားခြင်းတွေ ခေတ်စားလာဦးမဲ့ပုံဘဲ။း)
အဲဒီလို အဲဒီလိုတွေ ရှိနေတဲ့ အမေဂျမ်းတို့ရွာလေးကိုတော့ သတိရနေမိသား။
ပညာပေးအက်ဆေးလေး အရမ်းကောင်းတယ် ဆရာရေ့။
မြန်မာပြည်မှာ နည်းပေါင်းစုံနဲ့ စားနေတာတွေ
စားပွဲအောက်ကနေ ယူနေပေးနေတာတွေ ပြင်ဖို့ အများကြီးပါဘဲ ဆရာရယ်..
ကိုယ်တိုင်လည်း ပေးခဲ့ရတယ်.. (မပေးမဖြစ် တဲ့ အချိန်ကိုး)
အဲသလိုပေးမှလည်း ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်တာဆိုတော့ ပေးတတ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်
ယူတဲ့သူတွေတော့မသိဘူး ပေးတဲ့သူက ပေးရတာ ရှက်တယ်.ဆရာ
ကျွန်မတို့တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ဆိုရင် ပြင်ရမှာတွေ နေရာတိုင်းမှာဘဲနော်
ကိုယ်တိုင်လည်း ပြင်သင့်တာတွေ ပြင်ဖို့ ကြိုးစားပါဦးမယ် ဆရာရေ။
ဪမီးပျက်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းတရားကို အခုမှပဲသိတော့တယ် အစ်ကိုကြီးရေ။ ဆင်းရဲသားတွေကိုတော့ သနားမိပါရဲ့ဗျာ။
ကျွန်မတို့တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ဆိုရင် ပြင်ရမှာတွေ နေရာတိုင်းမှာဘဲနော်ဆရာ
2 December 2011 at 04:32
ဖတ်ရင်းနဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ပေမယ့် စာကြွင်းထဲမှာမှ ပြန်ပျော်သွားတယ်။ မီးက ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြန်လာတယ်ဆိုလို့။ ဒီအက်ဆေးကြောင့် မြန်မာပြည်သားများ မီးဒုက္ခမှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ...
အရမ်းကောင်းတဲ့ တင်ပြမှုလေးပေါ့ ဆရာဟန်ရာ။
အဲဒီလိုပဲ ကျနော်တို့လည်း ဟိုဘက်က လှည့်တွေးပေးရ ဒီဘက်က လှည့်တွေးပေးရနဲ့ ဘဝတွေက ကြာနေခဲ့ပြီ။
လှည့်တွေးပေးတဲ့ သူတွေလည်း လှည့်ပါများလုိ့ လည်နေပီ ထင်ပ..:)
အမေဂျမ်း ရဲ့ သား အမောင်ဂျမ်း လေးတွေပေါ့ ဆရာ......
သူတို့ကလည်း ရိုးရာမပျက် ချင်ကြလို့နေမှာပါဗျာ။
သည်လိုလူမျိုးတွေရှိနေသမျှ ကျွန်တော်တို့ ပြည်ကြီးက သူတကာ့ လက်ညိုးအောက်က ပျောက်မှာမဟုတ်ဘူး ဆရာ...။
ဆရာရေ အမေဂျမ်းလက်သစ် လေးတွေတော့
ဆက်လက်၍ သူခိုးကြီးငတက်ပြား လက်သစ်
ထိထိမိမိလေး တင်ပြထားတဲ့ လှပသေသပ်တဲ့ အနုပညာလေးပါလားအကို...
မရောက်တာကြာခဲ့ပြီ ကိုဟန်ကြည်။ အက်ဆေးအရေးနည်းနေကြတဲ့အချိန်မှာ အက်ဆေးတစ်ပုဒ်တွေ့ရတာ ကျေနပ်မိပါတယ်။ အမေဂျမ်းတဲ့လားဗျ။ တင်စားပုံသင်းလှချည်လား။ ကျွန်တော်ကတော့ စာဖတ်ရတာသဘောကျတော့ နောက်ကလာနေတဲ့ အသံကြီးက တော်တော်အနှောင့်အယှက်ပေးနေလေရဲ့ဗျာ။